Beelaha deggan galbeedka Hiiraan oo ka tashanaya sidii ay uga go'i lahaayeen Bariga Hiiraan kadib markii caddaallad darraddii ugu weyn ee abid soo bartay ay ku sameysay dowladda Prof. Geeddi iyo xaqiiqada dhabta ah ee madaxweyne Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi ay go'aansadeen. Ruunkinet 09/02/07
Shirar gooni gooni ah oo ay yeesheen wax garadka, aqoon yahannada iyo qeybaha kale ee bulshada ee beelaha deggan galbeedka Hiiraan ayaa la sheegay in ay ka arrinsadeen sidii ay uga go'i lahaayeen Barri Hiiraan.
Arrintan oo ay soo jeediyeen wax garadka beelahaasi ee deggan dalalka Yurub ayaa salka ku haysa caddaalad darrida ay maamulka sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka sameysay gobolka Hiiraan.
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi ayaa si caddaalad darri ah ugu magacaabay hal beel oo deggan Bariga Hiiraan guddoomiyaha gobolka iyo 4 guddoomiye degmo oo ka mid ah 6da degmo ee goblka Hiiraan ayagoo ugu daray taliyaha ciidada iyo awoodda dowladeed ee gobolka.
Beesha Deggan bariga Hiiraan ee ay dowladda Cali Geeddi u hiillisay ayaa la sheegay in inta badan ay raali ka yihiin qabsashada ciidamada dowladda Itoobiya ee Soomaaliya ayagoo weliba la sheegay in ciidanka ugu badan ee ka yimid gobolka Hiiraan ee taageersan dowladda federaalka ah ka yimaadeen beeshaasi.
Qaar ka tirsan taageerayaasha Cali Geeddi, Cabdullahi Yuusuf iyo galbeedka Hiiraan ayaa la sheegay in ay ka mideysan yihiin nacaybka ay u qabaan qaar ka tirsan beelaha USC-da oo horay u dhex maray dagaal sokeeye.
Sidoo kale, Cali Maxamed Geeddi ayaa u magacaabay dhammaan guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka Shabellada Dhexe mas'uuliyiin ay isku hayb yihiin in kastoo ay dad badan arrintaasi ka dhiidhiyeen.
Dhanka kale, madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wada qorshe uu ku magacaabayo mas'uuliyiinta gobolka Jubbada Hoose ayadoo warar xog ogaal ah sheegayaan in uu doonayo madaxweynaha in guddoomiyaha gobolkaaasi loo magacaaabo in ka soo jeeda beeshiisa in kastoo ay warar kalane sheegayaan in guddoomiyaha degamada Kismaayo loo magacaabi dooni mas'uul ka soo jeeda beesha Ogaadeen.
Gobolka Jubbada Hoose ayaa haatan waxaa gacanta ku haya nin lagu magacaabo Afguduud oo sheegtay in uu yahay taliyaha guutada 1aad.
Guutada koobaad ayaa la sheegay in yihiin taageerayaasha madaxweynaha halka guutada 2aadna yihiin taageerayaasha Barre Hiiraale ayadoo guutada 3aadna lagu sheegay in ay yihiin taageerayaasha Xiddig.
Siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa arrintan ku tilmaanay in ay la mid tahay magacyadii ay isticmaali jireen taageerayaasha marxuum Caydiid oo ahaa aag 1aad ilaa aag 5aad xilligii ay ururkii USC-da la daggaallamayeen maamulkii kacaanka Siyaad Barre.
Prof. Geeddi iyo Col. Cabdullahi Yuusuf ayaa lagu eedeeyaan in ay doonayaan in ay xilal sare u dhiibaan shaqsiyaad ay isku hayb yihiin inta ay xukunka hayaan.
Kala soco Ruunkinet magacyada iyo beelaha mas'uuliyiinta ay dalka u magacaabeen Prof. Geeddi iyo Col. Cabdullahi Yuusuf qeybaha dambe.